Wazee ဒီဂျစ်တယ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်ယခုရရှိနိုင်သည့် Skyward Kick Productions မှ 4K အကြောင်းအရာအသစ် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပေါ်ရှိနိုင်အခုတော့ Skyward Kick Productions မှစ. နယူး 4K အကြောင်းအရာ
Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပေါ်ရှိနိုင်အခုတော့ Skyward Kick Productions မှစ. နယူး 4K အကြောင်းအရာ
Denver - ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2017 - Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်, Cloud-ဇာတိကဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်လိုင်စင်န်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်မှုပေးသူ, ယနေ့သစ်ကိုကြေညာခဲ့သည် HD နှင့် 4K အကြောင်းအရာ Ottawa, အွန်-based Skyward Kick Productions ကနေပေါ်တယ်ယင်း၏ Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းမှတဆင့်လိုင်စင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Skyward Kick အစွန်းရောက်အားကစားဗီဒီယိုမှာအထူးပြုဒါပေမယ့်လည်းကော်ပိုရိတ်လေ့ကျင့်ရေးဗီဒီယိုနှင့်ကြော်ငြာထဲကနေဆုရရုပ်ရှင်ရုံအထိစီမံကိန်းများထုတ်လုပ်သည်။
"ကျနော်တို့က 2013 အတွက် Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအပ်လုဒ်တင်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအခန်းထဲမှာကြမ်းပြင်ထိမှန်ကြောင်းရိုက်ကူးငွေရရှိအောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်တော်တစ်ဦး 6K အနီရောင်လုပ်ငန်းအသွားအလာငါတို့၏ကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆင်ရေးအဆင့်မြှင့်င့်ခြင်းနှင့်ဘာသာရပ်ကိစ္စတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူ 4K ရိုက်ကူးတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့သိုလှောင်စုဆောင်းကြပါပြီ, "က Chris Chitaroni, ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ Skyward Kick ကဆိုသည်။ "ငါ့အကြိုက်ဆုံးရိုက်ချက်များ client ကို၏ရူပါရုံသို့မဟုတ်စီမံကိန်းရဲ့လမျးညှနျသို့ fit မဓာတ်ပုံနဲ့တစ်ညွှန်ကြားရေးမှူးကြောင့်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာထိုအရိုက်ချက်များအသစ်သောအသက်တာကိုရှာသည်ငါတို့အဘို့ဝင်ငွေမောင်းနိုင်သောနေရာအဖြစ်ထွက်ပေါက်ရှိသည်ဖို့, ငါ့နှလုံးချိုးဖြစ်ပါသည် အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာကြ၏။ "
Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူသည်ဗီဒီယိုလိုအပျသူဖောက်သည်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ပရီမီယံအကြောင်းအရာ၏တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးကိုကူညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲတစ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်, ထုတ်လွှင့်ခြင်း, ကြော်ငြာအေဂျင်စီအဖြစ်ဝယ်လက်သူတို့၏စီမံကိန်းများတွင်သုံးစွဲဖို့ရှာဖွေနှင့်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဝယ်ယူရန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းသွားပါ။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း Waze ဒစ်ဂျစ်တယ် Core, ရှိသမျှ Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောမိုဃ်းတိမ်များအတွက်အထူး built Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Skyward Kick စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဗီဒီယို၏ကျယ်ပြန့ဆက်ပြောသည်သိရသည်။ ဘေးဖယ်ထိုကဲ့သို့သောနှင်းလျှောစီး, စနိုးဘုတ်စီးခြင်း, ရေပြင်ဘုတ်စီးခြင်းနှင့်ဘီအမ်အိပ်စအဖြစ်အစွန်းရောက်အားကစားကနေ High-action ကိုရိုက်ကူးများများကနေ, ကော်ပိုရိတ်များနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စီမံကိန်းများကိုဆီသို့ရည်ရွယ်သစ်ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးလည်းရှိသေး၏။ ပိုပြီးလိမ်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာခဲ့ဘယ်တော့မှမမူကြောင်းကိုအမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်မှုပုံရိပ် - ဥပမာရောနှောကိုယ်ခံပညာအားကစားသမား, ပေါ့ပေါ့ကွန်ရက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်နိုင်အာဂရာရေတံခွန်နဲ့ Grand Canyon အများ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဝေဟင်ရိုက်ချက်များပါဝင်သည်။
4K အကြောင်းအရာပိုပြီးထင်ရှားတဲ့ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ archive ကိုအစဉ်မပြတ်နေ သာ. ကြီးမြတ်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်ဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုထင်ဟပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အစဉ်မပြတ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအသစ် 4K ဗီဒီယိုကိုဖြည့်စွက် Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်အဘို့အမြင့်မားသောဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ် "ဟု Alison Schreiber, လိုင်စင်အကောင့်မန်နေဂျာ Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဆိုသည်။ "Skyward Kick ရဲ့အသစ်အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာစာကြည့်တိုက်၏လတ်ဆတ်သောကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပေါ်အားကိုးသူကိုဝယ်လက်ပိုအမျိုးမျိုးကိုဆိုလိုသည်။ "
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/WazeeDigital/Wazee-Digital_Commerce-Niagara-Falls.png
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: နိုင်အာဂရာရေတံခွန်၏ပုံရိပ် Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပေါ်ရရှိနိုင်ရိုက်ကူး၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/tweet?text=New%20Skyward%20Kick%204K%20Content%20Now%20Available%20on%[အီးမေးလျ protected]_Digital% 20Commerce% 20-% 20https: //goo.gl/AYZKle
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ရုပ်ရှင်ရုံ ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားခြင်း ကော်ပိုရိတ် ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုဖိုင် ဓါတ်ပုံပညာ ထုတ်လုပ်သူ Skyward Kick Productions အားကစား ဗီဒီယို Waze ဒစ်ဂျစ်တယ် 2017-02-28
ယခင်: YouTube ကိုလူသားတွေဟာ၎င်း၏ဗီဒီယိုများအကဲခတ်တစ်ဦးကဘီလီယံနာရီတစ်ဦးကနေ့ဖြုန်းနေကြတယ်ဒါကဖော်ပြ
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်